Madaxweynaha oo la kulmay qeybaha bulshada Jigjiga – Radio Muqdisho
Madaxweynaha oo la kulmay qeybaha bulshada Jigjiga
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, oo weli ku guda jira booqasho uu ku joogo magaalada Jigjiga ee caasimadda Dowlad Degaanka Soomaalida Ethiopia, ayaa xarunta madaxtooyada ee maamulkaasi kula hadley odayaasha dhaqanka, hawlwadeenada iyo shaqaalaha rayidka ee degaanka.
Madaxweynaha oo uu wehliyay Madaxweynaha Dowlada Degaanka Soomaalida Ethiopia, Mudane Cabdi Maxamuud Cumar, ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay horumarka ka muuqda degaanka, isagoo intaa ku darey inuu aaminsan yahoo in guulaha la gaarey ay sabab u tahay wadashaqeynta iyo isku duubnida shacabka iyo Dowlad Degaanka Soomaalida Ethiopia.
Waxaa sidoo kale uu Madaxweynaha booqday Jaamacadda magaalada Jigjiga oo ay dhigtaan arday tiradoodu gaareyso 21,000 oo. Jaamacaddan ayaa sidoo kale leh kulliyad takhasus Afka-Soomaaliga ah.
Goobaha kale ee uu Madaxweynahu booqday waxaa ka mid ah goobaha ganacsiga , iyo isagoo socod ku marey qeybo ka mid ah magaalada Jigjiga.
Shir looga hadlayay dhiirigelinta ganacsiga haweenka oo lagu qabtay Muqdisho+Sawirro
Madaxweynaha Koofur Gabeed oo Baydhabo ka dhagax dhigay Jaamacad Cusub